Niels Hammer, အွန်လိုင်းစတော့ရှယ်ယာ Investing မှာစာရေးသူ
Niels Hammer ကရေးသားရေးသားချက်များ
Banc က de ဆွစ်ဇာလန်နေရင်မြန်အောင်ကနေမျှော်လင့်ထားရန်အဘယ်သို့နည်း,
စက်တင်ဘာလ 19, 2017
binary option ကိုလမ်းပြသော Uncategorized
သင်တို့သည်ဤ binary options များအချက်ပြမှုများကိုပူဇော်ကြပြီးဆံ့အသေးစိတ်ကို၏ကြင်နာတံ့သောအရာကို၏မသေချာရောက်နေတယ်ဆိုရင်, ဒီမှာသင်သိရန်လိုအပ်အရာဖြစ်ကြ၏။ ပလက်ဖောင်းအဆိုပါအချက်ပြမှုများကိုကွန်ပျူတာ၏မျက်နှာကို ထောက်. အရှိဆုံးအဆင့်မြင့် algorithms တချို့၏အသုံးပြုမှုကိုမှန်ကန်စေသည်။ အဆိုပါ algorithms [ ... ] ကြောင်းနီးပါးတိကျမှုရလဒ်များကိုကွန်ပျူတာအတွင်းရှိအချက်ပြကူညီ
24option အချက်ပြမှုများကိုရှေ့ဆက်သင်တဦးတည်းခြေလှမ်းတွန်းကူညီရန်သင် tools များပေးသည်
စက်တင်ဘာလ 16, 2017
ကုန်သည်များကသူတို့ကိုအမြတ်အစွန်းကောင်းတစ်ခုငွေပမာဏကိုအောင်ကူညီနိုငျသောအကောင်းဆုံးစာချုပ်ဒဏ်ခတ်ဖို့ရှာဖွေနေကြသောအခါ 24Option Signal ယုံကြည်စိတ်ချရသော, ထိုသူတို့ကအကောင်းဆုံးအရောင်းကောက်နေဆီသို့သူတို့ကိုပဲ့ပြင်တံ့သောလက်ျာအချက်ပြမှုများအဘို့ဆင်းကိုလိုက်ရှာဖို့ရှိသည်။ ကုန်သွယ်လောကီသားတို့သည်အများလွန်းမူကွဲနှင့်အန္တရာယ်များကိုအများကြီးပြည့်ဝ၏။ [ ... ]
CFD ကုန်သွယ် ပို. ပို. လူကြိုက်များနေ့စဉ်ဖြစ်လာနေသည်။ ဒါပေမယ့်ဘယ်လိုအတိအကျအလုပ်လုပ်နှင့်အားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များကိုဘာတွေလုပ်နေလဲသနည်း? ကျနော်တို့ကဒီပြည့်စုံ CFD ကုန်သွယ်လမ်းညွှန်အတွက် Difference ကုန်သွယ်များအတွက်စာချုပ်နှင့်ဆက်စပ်သောအားလုံးသင့်ရဲ့မေးခွန်းများကိုဖြေပါ။ Difference သည်တစ်ဦးကကန်ထရိုက် (CFD) [ ... ] ၏တန်ဖိုးအကြားခြားနားချက်ကိုတွက်ချက်ခြင်းဖြင့်ရောက်လာနေသည်
Binary Options ကိုဘာတွေလဲ? အဆိုပါအပြီးအစီးလမ်းညွှန်
သြဂုတ်လ 6, 2017
ကျနော်တို့မကြာခဏမေးမွနျးရ: binary options များကဘာတွေလဲ? binary options များဘဏ္ဍာရေးတူရိယာအရောင်းအဝယ်ဖြစ်ငွေရှာဖို့ရေပန်းစားနည်းလမ်းတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ သူတို့ကသူတို့ကိုကမ်းလှမ်းတဲ့သူ၏စည်းကမ်းချက်များ၌ရိုးရာ options များ, သူတို့ရဲ့ငွေဖြစ်လွယ်, ဆုလာဘ်များနှင့်အန္တရာယ်များအဖြစ်ဆုကြေးငွေကနေအတော်လေးကွဲပြားခြားနားပါတယ်။ ဒါ့အပြင်သူတို့က [ ... ] မှရိုးရာရွေးချယ်စရာကျေးဇူးတင်စကားနှိုင်းယှဉ်ကုန်သည်များကိုပိုမိုသုံးစွဲနိုင်ပါတယ်
သင်ကအမြတ် Make မှရှောင်ကြဉ်ပါရှိရမည်ထိပ်တန်း5CFD ထရေးဒင်းအမှား
ဇူလိုင်လ 7, 2017
Difference များအတွက်စာချုပ်များ (CFDs) အွန်လိုင်းကုန်သွယ်လူကြိုက်အများဆုံးဘဏ္ဍာရေးတူရိယာတို့တွင်အဖြစ်ကြသည်။ ဒေါ်လာထရီလီယံနေ့ရက်တိုင်းကုန်သွယ်နေကြသည်။ သို့သော် CFD ကုန်သွယ်မြင့်မားသောအန္တရာယ်များကိုသယ်ဆောင်။ ဤအဘဏ္ဍာရေးတူရိယာဝယ်ရောင်းချခဲ့သူမဆိုကုန်သည်ပင်သေးငယ်တဲ့အမှားသင့်ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၏ကြီးမားသောအတုံးအထဲကသုတ်နိုင်သည်ကိုသဘောတူပါလိမ့်မယ်။ အခြားတွင် [ ... ]